UN na EU adịghị mkpa? Onye bụbu onye isi UNWTO bụ Dr. Taleb Rifai na-echegbu onwe ya
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » UN na EU adịghị mkpa? Onye bụbu onye isi UNWTO bụ Dr. Taleb Rifai na-echegbu onwe ya
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • investments • Akụkọ na -agbasa na Jordan • News • Iwughachi • Safety • Akụkọ gbasara Seychelles • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Na ụnyaahụ iwughari. njem webinar, Alain St.Ange, onye na-agba ọsọ ka ọ bụrụ onye isi oche ọzọ maka Republic of Seychelles nwere ozi nye obodo nke mba.
“Coronavirus bịarutere n’enweghị onye kpọrọ gị oku. O mere ka ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ókèala, na mpaghara ghara ịdị mkpa.
Ọ bụghị mba, ọ bụghị mpaghara, mana ụwa dum nọ na nsogbu.
N'agbanyeghị ma ọ bụrụ na ị na-agba ụgbọ mmiri ma ọ bụ n'ụgbọ mmiri na-akwọ ụgbọ mmiri, anyị kwesịrị iso oke ifufe a ọnụ. Obodo nke mba dị iche iche ga-agbakọta ọnụ.
Europe na US na-enweta nnukwu ego iji zaghachi nsogbu a na-enweghị atụ. Europe na US ga-achọpụta na nke a bụ nsogbu zuru ụwa ọnụ.
N'ebe a n'Africa, Mba 54 niile ga-agbakọta ọnụ.
The Ndị njem nlegharị anya nke Africa butere ụzọ n’ichepụta PROJECT HOPE dịka nzaghachi nye Africa. Anyị niile nọ n'ụwa kwesịrị ile anya na foto niile, ọ bụghị kọntinent, mba, ma ọ bụ obodo nta.
Dr. Taleb Rifai, onye isi oche nke OLILEANYA OLILEANYA mụ onwe m kwa dị ka osote onye isi oche na-atụ anya maka ọkwa dị mkpa na-abịanụ n'oge na-adịghị anya. ”
Dr. Taleb Rifai bụ odeakwụkwọ ukwu nke World Tourism Organisation (UNWTO) ma gbakwunye na nzukọ ụnyaahụ.
“Ọ dịka onye ọ bụla nọ n’onwe ya. UN, European Union nwere ike bụrụ na ọ baghị uru. Mba na-alụ ọgụ maka onwe ha ma ha adịghị njikere ịzaghachi ụdị ọgba aghara dị na tandem na ọnụ.
Oge maka njem nlegharị anya n'ụlọ abụrụbeghị ihe dị mkpa. Taleb kwukwara. Ndị mmadụ kwesịrị ịma obodo nke ha tupu ha akpọọ ndị ọbịa ma chọpụta mba ndị ọzọ, anyị kwesịrị oge a iji wughachi ụlọ ọrụ njem na njem.
iwughari. njem bụ usoro malitere site Juergen Steinmetz, onye nkwusa nke eTurboNews soro ndị otu njem na njem njem na ndị otu nọ na mba 107. rebuidling.travel dabeere na Hawaii, USA.